Uthuli Lwe-Gobi Desert Lunquma Ikhwalithi Yomoya waseChina | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Idolobha laseBeijing (China)
Ezikhathini zakamuva kunamazwe amaningana amadolobha awo aphefumula umoya ongcolile. IBarcelona noma iMadrid ngezinye nje zazo, kepha icala laseChina liyethusa kakhulu: ngokusho kweWorld Health Organisation (WMO), unyaka nonyaka abantu abayizigidi eziyi-1,6 babulawa yizimbangela ezihlobene nokungcola.
Kuyathakazelisa ukuthi, ikhwalithi yomoya kule ngxenye yomhlaba inqunywa ngothuli oluvela ogwadule lwaseGobi, njengoba kuvezwe yithimba labaphenyi abavela ePacific Northwest National Laboratory (PNNL, ngesifinyezo sayo esiNgisini) naseScripps Institution of Oceanography e-University of California eSan Diego.
Kwakhe ukutadisha, esishicilelwe ephephabhukwini elithi »Imvelo», ososayensi bahlanganisa imininingwane yomlando namamodeli wekhompyutha. Ngokuhlaziya imiphumela bakwazi ukukuthola lokho ukwehliswa kothuli lwemvelo olusuka ehlane iGobi enkabeni nasenyakatho yeChina kubanga ukwanda kwentuthu empumalanga yeChina.
Kubonakala sengathi, izinhlayiya zothuli zasogwadule zisiza ekuphambukiseni ukukhanya kwelanga. Uma kunezinhlayiya ezimbalwa, inhlabathi ifudumele kunokujwayelekile futhi amanzi ayabanda, kunciphisa umehluko ebangeni lokushisa ebusika phakathi komhlaba nolwandle. Lokhu kwenza ukuthi umoya uvunguze ngamandla amancane, ngakho-ke umoya "umile".
Yize lokhu kungukwehliswa kwamakhilomitha ayi-0,16 kuphela ngehora, lolu shintsho kunomthelela omkhulu esimweni sezulu kanye nekhwalithi yomoya empumalanga yeChina. EBeijing sekuphele iminyaka emithathu belwa impi yokulwa nokungcola.
Lesi yisifundo esithakazelisa kakhulu, hhayi izwe lasempumalanga kuphela, kodwa futhi nabo bonke labo abathinteka ukungcoliswa kwe-anthropogenic, ngoba kukhombisa ukuthi konke kuxhunyiwe, ngandlela thile.
I-smog yinkinga ebucayi kakhulu okumele bonke ohulumeni bayithathe ngokungathi sína ukuze izakhamizi ziqhubeke nokuphefumula umoya ohlanzekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Uthuli lwasogwadule lwaseGobi lunquma ikhwalithi yomoya waseChina